Ku rakibidda Soo-kabashada la beddelay Bq Aquaris 5,7 "| Androidsis
Francisco Ruiz | | Soo kabashada Android, Bq
Maanta waxaan sharaxay habka ugu fudud ee aan ku qasban nahay Xidid Bq Aquaris 5,7 ″ kaliya 10 ilbidhiqsi iyo iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo kumbuyuutar shaqsiyeed inta hawshu socoto. Isla casharrada wax ku oolka ah ayaan taas kuugu ballanqaaday Waxaan ku bari lahaa inaad bedesho Hantida Soo-kabashada o Soo kabashada oo horay loogu sii qeexay heerka, loogu talagalay Soo-kabashada wax laga beddelay taas oo, tusaale ahaan, waxaan heli doonnaa ikhtiyaarka aan ku abuureyno kaydinta dhammaan nidaamkayaga qalliinka, iyo sidoo kale ikhtiyaarka ah inaan awoodno inaan iftiimiyo Roms-kii ugu fiicnaa ee la kariyey si xitaa wax badan looga helo muuqaalkan xiisaha leh ee 'Android Phablet'.
Hagaag, sidii lagu balamay waa deyn qofna ma jecla inuu wax ku yeesho, halkan waxaan kuugu keenayaa casharkaan fudud ku rakib Soo-kabashada la beddelay Bq Aquaris 5,7 ″, kaliya 5 daqiiqo, iyo sida casharkii hore, iyada oo aan loo baahnayn in loo isticmaalo kumbuyuutar shaqsiyeed hawsha.
2 Sida loo rakibo soo-kabashada la beddelay ee Bq Aquaris 5,7 ″
Shuruudda kaliya ee lagu awoodo ku rakib Soo-kabashada wax laga beddelay Bq Aquaris 5,7 ″, Ay the horay u xididay xarunta, Maaddaama habka biligleynaya ee soo-kabashadaan ama soo-kabashada cusub, waxaan u baahan doonnaa inaan u adeegsanno codsi gebi ahaanba bilaash ah oo aan ka soo dejisan doonno Google dukaankooda Play Store, kaasoo u baahan oggolaansho Superuser ah si uu ugu shaqeyn karo sidii la rabay.
Waxyaabaha kale ee ay tahay inaan sameyno, waxay noqon doonaan awood u sixi USB waxaa laga helay meesha meertada "Fursadaha horumarinta". Haddii qaybtani aysan ka muuqan goobaha Bq Aquaris 5,7 your, waa inaan ku hawlgalnaa adoo galaya "Ku saabsan qalabka" o "Macluumaadka Qalabka" y dhagsii toddobo jeer meesha ay ku qoran tahay lambar dhis. Fiidiyowgaan waxaan ku tusayaa sida loo sameeyo si aanad wax shaki ah uga qabin:
Sida loo rakibo soo-kabashada la beddelay ee Bq Aquaris 5,7 ″
Nidaamkan waxaan ku rakibaynaa Nooca Soo-kabashada ClockWorkMod 6.0.2.8 (CWM):
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa soo dejinta arjiga bilaashka ah Mobileuncle MTK, oo ka socota Google dukaanka Play Store.
Hadda, iyo ka hor inta aanad hawsha qaban, waxaan u soconnaa ka soo degso CWM 6.0.2.8 kor ku xusan isla xiriirkan waana sameyn doonaa nuqul ka sameysan adigoon hoos ugu dhigin xididka xusuusta gudaha of our Bq Aquaris 5,7 ″. Haddii aad si toos ah uga soo degsatay taleefankaaga gacanta, waxay u qalantaa inaad kaga tagto galka Download taas oo ah galka caadiga ah ee soo degsashada Android.
Hadda waxaan furi doonnaa arjiga Mobileuncle MTK, Waxaan ku siin doonaa rukhsad Superuser haddii aad codsato oo waxaan gujin doonaa ikhtiyaarka ah Beddel Soo-kabashada (Cusboonaysiinta Soo-kabashada):
Hadda waxaan u dhaqaaqeynaa galka aan nuqul ka sameyno ama aan ka soo dejino faylka CWM 6.0.2.8 ZIP, waan dooranay, waxaan xaqiijineynaa fulintiisa waxaanan beddeli doonnaa keydkii soo-kabashada ee dib-u-habeynta cusub ee wax laga beddelay.
Si aad u gasho Soo-kabashada cusub, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad dib u gasho Mobileuncle MTK oo aad gujiso xulashada Dib ugu bilow qaabka Habka.
Marka ugu horeysa ee aan helno Dib-u-soo-kabashada cusub, waxaa lagugula talinayaa inaad nuqul nuqul ah ka dhigto dhammaan nidaamkayaga hadda jira, tan waxaan ku gaari doonnaa ikhtiyaarka Nandroid backup waxa gudaha ku jira Kaabta iyo soo celiya.
La soco Androidsis maadaama aan ku soo bandhigi doono Roms-ka ugu fiican Bq Aquaris 5,7 ″ iyo sidoo kale habka loo rakibo isla.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » Sida loo rakibo soo-kabashada la beddelay ee Bq Aquaris 5,7 ″ (Aad u fudud)